Sunday March 08, 2020 - 10:45:36 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Kooxaha Xuuthiyiinta ee ka dagaallama wadanka Yemen ayaa shardi ku xiray wadahadallo dhanka siyaasadda ah oo ay lagalaan isbahaysiga Carabta ee wadankaas ku duulay.
Max'med Cabdi Salaam oo ah Afhayeenka Xuuthiyiinta ayaa sheegay in wadahadal ay lafuraan taxaalufka Carabta ay ka horreeyaan tallaabooyin dhowr ah sida in xayiraadda laga qaado wadanka Yemen islamarkaana lasoo afjaro dagaalka shan sana jirsaday.
Xuuthiyiinta ayaa dowladaha Sacuudiga iyo Imaaraatka Carabta ugu goodiyay weeraro hor leh haddii ay diidaan in ay aqbalaan shuruuradaha cusub, tan iyo markii isbuucii lasoo dhaafay ay wakiillada Iiraan ee Yemen ay lawareegeen gobolka Istiraatiijiga ah ee Al Jowf ayay xoojiyeen weeraradooda iyagoo helay awood melleteri iyo mid siyaasadeed.
illaa iyo hadda wax war ah kamasoo bixin dowladaha Imaaraatka iyo Sacuudiga oo ku aaddan shuruudaha cusub ee kasoo baxay Xuuthiyiinta, waxa loogu yeero beesha caalamka ayaa ugu baaqay dhinacyada ku lugta leh colaadda Yemen in ay ogolaadaan wadahadallo aan wax shuruud ah laheyn.
Dagaal askar iyo saraakiil lagu dilay oo ka dhax qarxay dowladaha Azerbaijan iyo Armenia.